lundi, 24 octobre 2016 22:52
JIRAMA Sambava : Ritra tanteraka ny solika
Niato tsy nihodina nanomboka tamin’ny 11h47min ny milin’ny JIRAMA raha mba nandeha tsizarizary izany hatramin’ny sabotsy teo. Ny antony dia ritra ny solika. Maizina ny tanànan’i Sambava amin’izao. Mihorohoro ny mponina amin’ny tsy fandriampahalemana, matetika dia ao anatin’ny delestazy no fanararaotan’ireo Jiolahy, ankoatr’izay dia mihantona avokoa ny asa aman-draharaha rehetra miankina amin’ny herinaratry ny JIRAMA.
lundi, 24 octobre 2016 20:32
Maizina tanteraka ny tanàna, tapaka ny jiro. Tsy misy mino ny fanazavana nomen'ny Praiminisitra ny mponina amin'izany resaka olana eo amin'ny fitaterana solika izany. Ahay tsy hajà hoy ny olo atoy. Tsy zaza izahay, fa tsy manam-bola andoavana ny vidi-tsolika ny fanjakana hoy ny aty Toliara. Nahoana ny solika tonga tsara eny amin'ny station hoy izy ireo ka tsy ho tonga ety amin'ny Jirama?
lundi, 24 octobre 2016 20:14
JIRAMA Toamasina : Mpiasa iray matin’ny herinaratra
Hasomparana sa loza efa hitranga ? Lehilahy iray, mpiasan’ny Jirama no maty tsy tra-drano tao anaty tranon-jiro tao Bazary Be androany. Raha iny mbola teo ampanamboarana fitaovana simba tao amin’io tranon-jiro io iny indrindra izy no nisy namerina tampoka ny herinaratra, ka nahafaty azy vokatry ny hery vaikan’ny herinaratra. 31 taona ity niharam-boina ity, ary roa taona niasana tao amin’ny Jirama Toamasina izy no izao nindaosin’ny fahafatesana izao. Antenaina fa hisy fanadihadiana ary hisy fandraisana andraikitra amin'izao fahavoazana izao, ary anasazy entitra raha nisy fahadisoana. Tandremo sary mety hanohina.
lundi, 24 octobre 2016 20:10
Raharaha Ampasimbe Manatsatrana : 10 lahy nampidirina am-ponja vonjimaika
Natolotra ny Fampanoavana teto amin’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany Toamasina androany ireo 25 lahy voarohirohy tamin’ny fifandonana, naharatrana olona sy nahasimbana zavatra tao Ampasimbe Manatsatrana ny 13 sy 14 oktobra 2016, tokony nametrahana tamin’ny toerany ny Ben’ny tanànan’Ampasimbe Manatsatrana Jacob Honoré. 10 lahy no vita fanadihadiana androany tontolo andro, ka fitanana am-ponja vonjimaika no didy savaranonando navoakan’ny zokiolon’ny mpitsara mpanao famotorana. Hitohy ny talata 25 oktobra ny famotorana ireo 15 ambiny.
lundi, 24 octobre 2016 20:09
Fifandonana tao Ampasimbe Manatsatrana : Namoy ny ainy ilay rangahy iray naratra mafy voatifitra tamin’ny basim-borona
Namoy ny ainy androany alatsinainy 24 oktobra maraina tao amin’ny HJRA Antananarivo ilay rangahy iray naratra mafy voatifitra tamin’ny basim-borona nandritra ny fifandonana tamin’ny 14 oktobra 2016 tao Ampasimbe Manatsatrana, saika hametrahana amin’ny toerany ny Ben’ny tanàna nandresy teny amin’ny Fitsarana, Jacob Honoré. Valo no naratra tamin’io, notsaboina tao Toamasina ny ankamaroany. Nentin’ny havany notsaboina teto Antananarivo ity lehilahy ity noho ny hamafin’ny fahavoazany, nefa izao tsy tana izao ny ainy. Ho tonga eto Toamasina ny talata 25 oktobra ny nofo mangatsiaka.
lundi, 24 octobre 2016 16:45
Famokarana herinaratra : Hotrandrahan’ny Sinoa ny riandranon’Ambodiroka-Maevatanana
Hamokatra herinaratra hatramin’ny 42 Mégawatt/heure Ambodiroka rehefa tontosa ny asa fanorenana tohodrano hataon’ny Sinoa ao Ambodiroka, izay toerana hivarinan’ny ranon’i Betsiboka. Hanomboka amin’ny taona 2017 ny asa ary haharitra roa taona. Hamatsiana an’i Mahajanga sy Maevatanana ny 20 Mégawatt/heure amin’io. Fantatra ihany koa moa fa io reniranon'i Betsiboka io dia anisan'izay feno volamena tokoa. Hatreto moa dia tsy fantatra hatrany ny fifanarahana eo amin'ny Sinoa sy ny Fanjakana Malagasy.
lundi, 24 octobre 2016 16:36
Sambava : Ankizivavy 8 taona nisy nanolana
Hiakatra famotorana anio tolakandro ao amin’ny Borigadin’ny Zandarimaria Amboahangibe ny tovolahy iray, 25 taona eo, izay nanolana ankizivavy 8 taona samy monina ao Antsirabe Kaominina Antsahavarive. Ny alarobia lasa teo no tratran’ity tovolahy ity teny anelanelan-dalana ilay zaza ka nanamparany ny filan-dratsiny ary nanaovany herisetra ka naratra ny fivaviany. Niaiky ny hadisoany ilay tovolahy ka nitondra fianakaviana hanao raharaham-pihavanana ka nitondra vola 350.000 Ariary fa tsy nety nandray izany ny Renin’ilay zaza ka nametraka fitoriana any amin’ny mpitandro filaminana.
lundi, 24 octobre 2016 15:44
Mpitsabo nify sy ativava : Niampy 25 ireo dokotera amperin’asa
Navoaka androany ireo dokotera mpitsabo nify sy ny ativava andiany faha-31 “Ilo Miampita” nianatra tao amin’ny IOSTM Mahajanga. Miisa 25 mianadahy izy ireo. Mahatratra 1.366 izao ireo mpianatra mpitsabo nify sy ativava navoakan’ity sampam-mpianara eo anivon’ny oniversite Mahajanga ity nandritra ny 39 taona nijoroany.
lundi, 24 octobre 2016 10:31
Sary Youtube TvPlus
2017: Taonan'ny fampandrosoana tanteraka
Nandritra ny fandaharana Dondresaka tao amin'ny TVPlus omaly alahady 23 oktobra dia nampanantena ny solotenam-panjakana, toa an'i Député voafidy tany Betroka, Randrianasolo Jean Nicolas, fa dia amin'ny taona 2017, dia ho feno tanteraka ny fampandrosoana ny ny Firenena satria dia ho avy daholo ireo mpamatsy vola rehetra.
lundi, 24 octobre 2016 09:44
Tetezan'i Bekiraro : Vehivavy iray hita faty
Vehivavy iray tokony ho manodidina ny 40 taona eo no hita faty teny amin'ny fokontanin'ny tetezan'i Bekiraro io maraina io. Tsy fantatra mazava ny antony nahafaty ity ramatoa ity, fa araka ny filazan'ireo nanatri-maso dia matin'ny anohanana izy ity, niampy fisotroana toaka ihany koa.
Page 322 sur 424